🥇 ▷ Barnaamijka GPS Waze app ayaa na soo ogeysiin doona marka qadkayagu ka soo gudbo Madrid Central ✅
Barnaamijka GPS Waze app ayaa na soo ogeysiin doona marka qadkayagu ka soo gudbo Madrid Central
Mid ka mid ah barnaamijyada aan inta badan u isticmaalno aaladdayada mobilada ayaa ah Barnaamijyada GPS navigation. Ku nabad gal sahaminta soo jireenka ah ee nagu qasbay inaan iibsano aalad cusub oo taas u adeegta taas, oo aan ku salaamo codsiyada cusub ee aan annaga maanta la wadno oo aan si weyn u fududeyno dhaqdhaqaaqa magaalooyinka.
Mid ka mid ah kuwa aadka loo adeegsado ayaa ah Waab, waa barnaamij ay Google soo afjaray iibsashada, taasina waxay leedahay qayb dheeraad ah oo bulsheed oo ka caawisa si weyn marka ay timaado in laga fogaado ciriiriga taraafikada ama dhacdooyinka kale ee aan laga fileynin ee aan ka heli karno wadada. Hadda Ku dar suurtagalnimada in aan maareyno marinkeenna iyada oo aan ka hortageyno aagagga muranka badan ee qiiqa hooseeya. Khaladku wuu soo galayaa Bartamaha Madrid…
Waa inaan nidhaahnaa waxaan ku aragnay tan “beta” Waze beta, malaha qaabkii ugu dambeeyay ilaa maalmo kadib. Illaa iyo hadda, waxaan arki karnaa aag yar oo gaagaaban oo ay ku calaamadsan yihiin xariiq “raambiyaal taraafikada” oo qaab la mid ah kan aan aragno markii app kaamirooyinka iftiinka taraafikada ay nooga digayaan marka ay gudbaan. Haddaba, raac isla aagga ay qeexeen radaarrada taraafikada, laakiin waxa xiisaha lihi waa kaas markaad qorsheynayso wado iyo aragto ikhtiyaarada suurtagalka ah ee aan way soo sheegi doonaan marka mid ka mid ah marinnadaas ay tahay inuu maro marinka yar ee hawada hoose, kiiskan Bartamaha Madrid Sida aad ku arki karto sawirka hoggaaminaya jagadan.
Akhbaar wanaagsan maxaa yeelay sida aad ku aragtid muuqaalka, mararka qaar Waze waxay heli kartaa waddo aad uga dhakhso badan laakiin taasi waxay ka gudubtaa aaggan bartamaha Madrid, waqtigaas waxaan sameynay qabqabashada. waxaa jiray farqi udhawaad ​​15 daqiiqo inta udhaxeysa wadada ka gudubtay Bartamaha Madrid iyo wadada xigta ee ugu dhakhsaha badan taas ayaa ka fogaatay. Si kastaba ha noqotee, waa inaan had iyo jeer tixgalineynaa xaddidaadda gudbinta aaggan si looga fogaado bixinta ganaax. Markaa waad ogtahay, inaad barnaamijka cusboonaysiiso si aad u lahaato ogeysiisyadaas oo ka gudbaya meelaha qiiqa hooseeya sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, habka ugu fiican ee lagu ogaado meesha aan ku safri karno iyada oo kuxiran gaariga ama mootada aan haysano. Ku Fiican Waze maadaama tani ay ahayd howlo maqnaa.